ကယန်း (ပဒေါင်) | သင်ကာဘုန်းမြင့်-Thinker Bhone Myint
← ဖွဲ့တည်ရာနှင့် သောင်းပြောင်းထွေလာ
April 19, 2008 · 6:38 am
ကိုမင်းမင်းရဲ့ ဘလော့ဂ်မှာ ပဒေါင်းတွေအကြောင်းကို ဘီဘီစီသတင်းတစ်ပုဒ်ကနေ ဘာသာပြန်ထားတာ ဖတ်ပြီး ဒီပို့စ်ကို ရေးဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်က ကျနော် ကယန်း (ပဒေါင်) တွေ အကြောင်း ကျမ်းရေးဖို့ လေ့လာနေတာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျနော့ ဘလော့ဂ်မှာ တစ်ခါမှ မဖော်ပြဖူးပါဘူး။ အရင်ဘလော့ဂ်တုန်းကတော့ Paper and Essay ဆိုပြီး ခေါင်းစဉ်တွေတော့ တင်ဖူးပါတယ်။ ကယန်း (ပဒေါင်) အတွက် ဘလော့ဂ် သတ်သတ်လုပ်ချင်လို့ မဖော်ပြဖြစ်တာလည်းပါပြီး၊ ဒီအကြောင်းတွေကို ကျောင်းစာသက်သက် လေ့လာဖို့ အာရုံစူးစိုက်တာမို့ မတင်ဖြစ်တာလည်း ပါပါတယ်။
ကိုမင်းမင်းဘလော့ဂ်ကို ဖတ်ပြီး ဘလော်ဂါအပေါင်းအသင်းတွေဆီက မှတ်ချက်တောင်းရင် ကောင်းမယ်လို့ စဉ်းစားမိပါတယ်။ တိုင်းရင်းသား ပဒေါင်များရှိရာသို့ ရောက်ဖူးသူဖြစ်စေ၊ တွေ့ဖူးသူဖြစ်စေ အတွေ့အကြုံ၊ အမြင်လေးတွေ ရေးခဲ့ကြရင် ကျနော့ စာတမ်းမှာ အသုံးဝင်မယ်လို့ ယုံကြည်မိပါတယ်။
နောက်တစ်ခု ပြောချင်တာက အင်တာနက်မှာ ဘလော့ဂ်တွေ အပေါ်လိုက်ရှာလိုက်တဲ့အခါ ကိုယ့်မြေကထွက်ခွာပြီး သူတပါးမြေမှာ ခေါင်းပုံဖြတ်ခံနေရတဲ့ တိုင်းရင်းသားပဒေါင်တွေအကြောင်း Awareness ရှိသူ မတွေ့ရသလောက်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံခြားသားတွေရဲ့ ဘလော့ဂ်တွေမှာတော့ အများကြီး ပြောဆို ဆွေးနွေး၊ ကန့်ကွက်ကြတာကို ဘာသာစကားမျိုးစုံနဲ့ တွေ့ရတာပါပဲ။
ပဒေါင်တွေ အကြောင်း ရေးသားထားတဲ့ စာအုပ်စာတမ်းတွေ မရှိသလောက်ပါပဲ။ မြန်မာပြည်မှာ ၂၀၀၅ တုန်းက တက္ကသိုလ်ဆရာမတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ သျှင်ထွေးယဉ်ရဲ့ “ကယန်း (ပဒေါင်)”ဆိုတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ် စာပေဗိမာန်ကနေ ထွက်ဖူးပါတယ်။ ကယန်းစာရေးဆရာဖြစ်တဲ့ ပါစကယ် ခူးသွေးရဲ့ From the Land of Green Ghosts: Burmese Odyssey ဆိုတာကတော့ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းဖြစ်ပြီး ၂၀၀၂ မှာ အင်္ဂလန်ကနေ ထုတ်ဝေပါတယ်။ စာအုပ်အဖြစ်ထွက်မလာတာကတော့ The Narratives, Beliefs and Customs of the Kayan People ဖြစ်ပါတယ်။
ကယန်း (ပဒေါင်)နှင့် ပတ်သက်သမျှ
ပဒေါင်တိုင်းရင်းသားများအကြောင်း မြန်မာဘာသာအပြင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ပါ အွန်လိုင်းတွင် ဖတ်ရှုနိုင်သမျှ ရှာဖွေ စုစည်းထားဖြင်းဖြစ်ပါသည်။
ထိုင်းတွင်တရားမ၀င်နေထိုင်သည့် ပဒေါင်လည်ပင်းရှည်များ ဒုက္ခသည်စခန်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ရမည်/ခေတ်ပြိုင်-မတ် ၂၀၊ ၂၀၀၇
ပဒေါင်တိုင်းရင်းသားများ တတိယနိုင်ငံတွင် အခြေချရေး ထိုင်းအာဏာပိုင်များငြင်းဆို/ဧရာဝတီ-ဧပြီ ၁၁၊ ၂၀၀၇
နယ်မြေမအေးချမ်းသရွေ့ ဌာနေပြန်မည်မဟုတ်ဟု ပဒေါင်ရွာလူကြီးပြောဆို/ခေတ်ပြိုင်-ဇူလိုင် ၅၊ ၂၀၀၇
လည်ပင်းရှည်ပဒေါင် (၆) ဦး တရားမ၀င် အလုပ်လုပ်ကိုင်မှုဖြင့် ဖမ်းဆီးခံရ/ခေတ်ပြိုင်-နိုဝင်ဘာ ၂၂၊ ၂၀၀၇
ရိက္ခာပုံမှန်မရ၍ ကြေးကွင်းပတ်ကယန်းမိသားစုများ အခက်ကြုံနေရ/သတင်းနှင့်မီဒီယာကွန်ယက်-ဇန်န၀ါရီ ၈၊ ၂၀၀၈
ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များ ပဒေါင်ရွာနှင့်…/Weekly Eleven News-ဇန်န၀ါရီ ၉၊ ၂၀၀၈
နတ်စိမ်းတို့ဌာနေမှသည် စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲ ကျင်းပ/ခေတ်ပြိုင်-ဖေဖော်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၀၇
ပဒေါင်လူငယ်တစ်ဦးရဲ့ ကိုယ်တွေ့မှတ်တမ်း/အီဒစ် မီရန်တေး
Targay Blog (ကယန်းဂျာနယ်လစ်/ဘလော်ဂါ)
ကယား၊ ကယန်း၊ ကရင်နီ/SoWhat-ဇွန် ၂၄၊ ၂၀၀၇
ဖတ်ပေးစေချင်လို့/ခင်မင်းဇော်-ဇွန် ၂၇၊ ၂၀၀၇
ပဒေါင်ဆိုတာ ငှက်လား/မယ်လိုဒီမောင်-သြဂုတ် ၃၊ ၂၀၀၇
ကယားပြည်နယ်/လွိုင်ကော်မြို့-ကန္ဒာရ၀တီ-သြဂုတ် ၁၂၊ ၂၀၀၇
ထိုင်းနိုင်ငံရှိ လူတိရိစ္ဆာန်ရုံမှ မြန်မာ မိန်းမသားများ/မင်းမင်း-ဇန်န၀ါရီ ၃၁၊၂၀၀၈
Karen Long Neck/Oriental Portal by Mr. Glenn Casaer
What Pain is Beauty/Barstowmama
Dr.Kim’s Travel Story
Kayan or Padaung Myanmar
Hill Tribe of the Golden Triangle
What is the Padaung Hill Tribe
The Secret of the Giraffe-Women, Finally Revealed/Dr.Johan van Roekeghem
MacMillan, Lorna Nanclares, Francisco
Tourism and ethnic identity: creating the Long-Neck Karen of Northwest Thailand (Senior Honors Thesis)
Theses at University of California, Barkley
ယဉ်ကျေးမှုကို ဈေးကွက်သွင်းခြင်းနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှု – ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်ရောက် ကြေးကွင်းပတ်ကယန်း (ပဒေါင်)များအား လေ့လာချက်။
ဒေးဗစ်. အယ်လ်. ရာဝစ် (အမေရိကန်)
ဖြစ်တည်မှုနှစ်ခုအကြား – ထိုင်းနိုင်ငံ၊ မယ်ဟောင်ဆောင်ရောက် ကယန်းဒုက္ခသည်များ၏ နိုင်ငံရေးလက္ခဏာသရုပ်နှင့် အခွင့်အရေးအတွက် ညှိနှိုင်းမှု။
Filed under Anthropology, Experience, Knowledge, Research
Tagged as Anthropology, Kayan, Padaung, Research
7 responses to “ကယန်း (ပဒေါင်)”
ကောင်းတယ်ဗျာ။ ဒါမျိုးလေးတွေကို သိတဲ့သူရှားတယ်။ ပဒေါင်ဓာတ်ပုံတွေကလည်း တော်တော်မိုက်တယ်ဗျ။
April 19, 2008 at 8:35 am
အမအမျိုးသားနဲ့ အမကတော့ ကယန်းပြည်သစ်ပါတီနဲ့အတူ ကယန်းနယ်ထဲမှာ နေခဲ့ဘူးပါတယ်။ အဲဒီကယန်းလူမျိုးတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့အချို့အကြောင်းလေးတွေကို မိုးကြိုးသတင်းစာမှာ ဆောင်းပါးရေးဖူးပါတယ်။ အမ ဘလော့မှာ ပြန်တင်ပေးပါ့မယ်။
ခါခါဘိုရာဇီဝက်ဆိုဒ်မှာလဲ ကယန်းအမျိုးသားခေါင်းဆောင် ကွယ်လွန်စဉ်က အမှတ်တရအနေနဲ့ အဲဒီဆောင်းပါးကို ပြန်တင်ထားပေးပါတယ်။ ရှာဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုလဲ ရနိုင်ပါတယ်။
April 20, 2008 at 3:02 am
ဗဟုသုတွေ အများကြီးရတယ် ကိုဘုန်းရေ
ပုံတွေ ကြည့်ရုံနဲ့ကို တော်တော် စိတ်ဝင်စားနေပြီ။ စာတွေပါ အများကြီး ဖတ်ရတော့ အားရစရာပဲဗျ။
ကောင်းလိုက်တာ ဗျာ .. ဆက် လုပ်ဗျ .. တစ်ကယ့် တိုင်းရင်းသား အမွေ အနှစ် တွေ … ခရီးသွားလုပ်ငန်း အပြင် လူမှု စီးပွားဆိုင်ရာ သုံးသပ် ချက် လေးတွေ ပါ ထည့်ပါလား ဗျ 😛
Pingback: Karenni and Its Sub-Tribe « M M Ŧ ђ ĩ ŋ ķ є я
ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုတွေ့ တော့သဘောကျမိတယ်…စိတ်ဝင်စားမိတယ်..ဗဟုသုတရပါတယ်
Archives Select Month June 2020 (2) May 2020 (3) April 2020 (3) March 2020 (2) February 2020 (2) January 2020 (13) December 2019 (10) November 2019 (2) October 2019 (12) September 2019 (4) August 2019 (7) July 2019 (16) April 2019 (8) March 2019 (3) February 2019 (4) January 2019 (7) December 2018 (6) November 2018 (12) October 2018 (12) September 2018 (15) August 2018 (13) July 2018 (4) June 2018 (2) May 2018 (10) April 2018 (3) March 2018 (20) February 2018 (5) January 2018 (5) December 2017 (8) November 2017 (6) October 2017 (4) September 2017 (16) August 2017 (14) July 2017 (3) June 2017 (4) May 2017 (1) March 2017 (2) November 2016 (1) September 2016 (1) August 2016 (2) July 2016 (4) June 2016 (7) May 2016 (3) April 2016 (2) March 2016 (4) January 2016 (6) December 2015 (2) November 2015 (3) October 2015 (1) September 2015 (2) August 2015 (4) July 2015 (3) May 2015 (2) April 2015 (2) March 2015 (4) February 2015 (9) January 2015 (2) December 2014 (2) November 2014 (8) September 2014 (5) August 2014 (3) May 2014 (4) March 2014 (2) February 2014 (1) January 2014 (1) December 2013 (1) November 2013 (4) October 2013 (3) September 2013 (6) August 2013 (6) July 2013 (3) June 2013 (4) May 2013 (6) April 2013 (13) March 2013 (4) February 2013 (5) January 2013 (4) December 2012 (12) November 2012 (6) October 2012 (11) September 2012 (5) August 2012 (3) July 2012 (2) June 2012 (5) May 2012 (11) April 2012 (7) March 2012 (4) February 2012 (2) January 2012 (5) December 2011 (1) November 2011 (1) September 2011 (2) August 2011 (11) July 2011 (2) June 2011 (1) May 2011 (1) April 2011 (3) March 2011 (2) February 2011 (5) January 2011 (4) December 2010 (5) November 2010 (4) October 2010 (3) September 2010 (3) August 2010 (3) July 2010 (9) June 2010 (3) May 2010 (11) April 2010 (3) March 2010 (2) February 2010 (3) January 2010 (22) December 2009 (20) November 2009 (14) October 2009 (2) September 2009 (4) August 2009 (7) July 2009 (6) June 2009 (7) May 2009 (3) April 2009 (12) March 2009 (11) February 2009 (11) January 2009 (19) December 2008 (18) November 2008 (48) October 2008 (4) September 2008 (18) August 2008 (23) July 2008 (23) June 2008 (30) May 2008 (19) April 2008 (9) March 2008 (10) February 2008 (6) January 2008 (17) December 2007 (4) November 2007 (14) October 2007 (5) September 2007 (12) August 2007 (7) February 2007 (3) January 2007 (2) November 2006 (1) September 2006 (2) July 2006 (3) June 2006 (2)
Categories Select Category American (1) Announcement (49) Anthropology (20) Art (87) Article (93) ကေတီကေ (1) Biography (7) Blogging (19) Book (14) Book Review (7) Buddhism (2) Burma (4) Cambodia (1) Cartoon (10) Chin (2) China (3) Classic (25) Collection (3) Comparative Studies (15) Conceptualization (3) Critic (2) Cross-Border Studies (6) Culture (6) Data (4) Development (14) Developmentalism (4) Dialogue (5) Diary (11) Dictionary (11) Download (6) e-Book (18) e-Library (1) Ecology (3) Economics (10) Education (20) Environment (12) Environmentalism (6) Essay (49) Ethnic Minority (16) Existence Magazine (11) Experience (55) Facebook (8) Fellowship (1) Gender (7) Globalization (4) Health (7) History (29) Human Rights (3) International (28) Interview (6) IT & Blogging (27) Joke (17) Journalism (28) Journalist (3) Karen (1) Karenni (3) Kayah (2) Kayan (3) Knowledge (23) Ko Hla Aung (1) Language (6) Lao (1) Literature (29) Local Knowledge & Local Right (10) Magazine (2) Maghadewa Linkar Thit (3) Management (6) MCN (33) Media (25) Military Affairs (3) MOE (6) Movie (4) Music (9) Myanmar (9) Nandar Phone Myint (8) Nargis (16) Nation-State (1) Natural Resource Management (12) News (48) Novel (4) Obituary (19) Paper (16) Personal (8) Perspective (9) Philosophy (32) Photo (14) Poem (132) Political Ecology (12) Politics (120) Poststructuralism (3) Poverty (7) Property Right (3) Psychology (2) Reading Notes (7) Reference (7) Religion (37) Research (45) Research Methodology (2) Review (5) Review (1) Revolution (1) Satire (11) Scholarship (3) Shan (3) Sharing (15) Short Story (14) Social Network (3) Social Science (2) Southeast Asia (3) Story (8) Summary (25) Survey (1) Sustainable Development (2) Tabloid (1) Tag (7) Thailand (8) Theories and Concepts (7) Thesis (2) Thought (2) Trade (2) Training (1) Translation (10) Uncategorized (23) Unicode (9) WikiLeaks (5) Wikipedia (13) Wordpress (5)
100 % to ???
နိုင်ငံတကာ ဂျော့ဂှ် ဖလွိုက် ဆန္ဒပြပွဲ တချိုက